Amazon oo raalli gelin ka bixisay caqabadaha kaadida ka haysta shaqaalaheeda badankooda - Wardeeq 24 TV Amazon oo raalli gelin ka bixisay caqabadaha kaadida ka haysta shaqaalaheeda badankooda Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Amazon oo raalli gelin ka bixisay caqabadaha kaadida ka haysta shaqaalaheeda badankooda
Amazon oo raalli gelin ka bixisay caqabadaha kaadida ka haysta shaqaalaheeda badankooda
Shirkadda Amazon ayaa raalligalin ka bixisay been abuur ay hore ugu ku beenisay in darawallada, mararka qaar, lagu qasbo inay ku kaadiyaan dhalooyinka caagga ah.
“Mushahar siinta shaqaalaha $ 15 / saacaddiiba kaa dhigi mayso ‘goob shaqo oo horumar leh’ marka aad shaqaalahaaga ku kellifto in ay caagado ku kaajaan “ayuu qoray usbuucii hore.
Dhowr warbaahin ayaa markaa soo xigtay shaqaale fara badan oo Amazon ah kuwaas oo xaqiijiyay in aan fursad kale la siin aan hayn in ay kaadiyaan dhalooyinkaas caagga ah inta ay shaqeynayaan. Waxay sidoo kale ku tilmaameen dhaqammo shaqo oo aan kala joogsi lahayn, labadaba xarumaha fulintooda iyo qaybta darwallada alaabta gudbiyaba.
Previous articleWaa kuma wiilka doonaya inuu baddelo feeryahanka Muslimka ah ee Khabib?
Next articleMadaxa gaashaandhigga ee Filibiin ayaa sheegay in Shiinaha uu damacsan yahay in uu qabsado aagag badan oo ku teedsan Koonfurta Shiinaha